Nagarik Bazaar - अहिले कस्तो एन्ड्रोइड स्मार्टफोन किन्ने ?
अहिले कस्तो एन्ड्रोइड स्मार्टफोन किन्ने ?
स्मार्टफोनको गतिशील विकास र प्रगतिले गर्दा स्मार्टफोनको जगतमा छोटो समय मै पनि निकै धेरै परिवर्तन आएका छन् । कुनै पनि प्रविधि आजभोलि केही समय मै पुरानो भइसक्छ । यो द्रुत गतिमा हुने विकासको प्रत्यक्ष असर हो । त्यसैले स्मार्टफोन किन्दा आजको भन्दा पनि भोलिको लागि सोच्नुपर्ने हुन्छ ता कि तपाईंले आज धेरै रकम तिरेर किनेको स्मार्टफोन केही समय मै पुरानो र प्रयोगहीन नहोस् । २०१८ मा आएर कस्तो किसिमको स्मार्टफोन किन्ने ? कस्तो नकिन्ने ? भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
१. युएसबी सी भएको
युएसबी सी (USB) नै भविष्य हो । विस्तारै गरेर सबै उपकरणहरु– ल्यापटप, स्मार्टफोन, टिभी, मोनिटर, स–साना एसेसरिज, कम्प्युटर आदि – सबैमा पुरानो पोर्टको सट्टा युएसबी सी नै आउँदैछ । युएसबी सी बहुमुखी पोर्ट हो । यसलाई डेटा र चार्जका लागि मात्र नभएर हेडफोन, भिडियो आउट र इन, अन्य उपकरण जोड्न र इन्टरनेटका लागि प्रयोग गरिन्छ । कतिपय एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा त हेडफोन ज्याकको सट्टा युएसबी सी नै गीत सुन्नका लागि प्रयोग गरिन्छ । यसर्थ पुरानो माइक्रो युएसबी पोर्ट हट्दै गएको र केही समयपछि नै चलनचल्तीबाट हराउने भएकाले नयाँ स्मार्टफोन किन्दा युएसबी सी भएकै रोज्नुहोस् ।
२. १८ः९ डिस्प्ले
१६ः९ अर्थात् २०१७ सम्म प्रयोग भएको स्मार्टफोन डिस्प्लेको अनुपात पनि अहिले हराउँदै गएको छ । अधिकांश स्मार्टफोन निर्माताले १६ः९ का स्मार्टफोन रिलिज गर्न छाडिसके । १८ः९ डिस्प्लेको अनुपातले गर्दा साना स्मार्टफोनमा ठूलो साइजको डिस्प्ले राख्न सम्भव भएको छ । १८ः९ अनुपातको डिस्प्ले भएको स्मार्टफोन हेर्दा पनि आकर्षक देखिन्छन् । स्मार्टफोन निर्माताले आफ्ना सस्ता र मिडरेन्ज स्मार्टफोनमा पनि १८ः९ डिस्प्ले राख्न सुरु गरेका छन् । अब विस्तारै सबै एप र गेम पनि यही अनुपात कै लागि निर्माण गर्न थालिनेछ । यसबाट १६ः९ अनुपातको डिस्प्ले लोप हँुदै जाने निश्चित छ । त्यसैले नयाँ स्मार्टफोन किन्दा १८ः९ अनुपातको डिस्प्ले भएको रोज्नु उचित हुन्छ ।
३. फास्ट चार्ज
फास्ट चार्ज नौलो प्रविधि नभए २०१८ मा आएर मात्र यसमा सबैको ध्यान गएको छ । फास्ट चार्ज सपोर्ट गर्ने स्मार्टफोन मिल्ने चार्जरको सहायताबाट निकै चाँडो चार्ज गर्न सकिन्छ । आधा घन्टामै ५० प्रतिशतसम्म चार्ज गर्न सक्ने विशेषता भएका स्मार्टफोन बजारमा उपलब्ध छन् ।
४. पर्याप्त सिस्टम मेमोरी र स्टोरेज
सिस्टम मेमोरी भन्नाले र्यामलाई बुझिन्छ । जति धेरै र्याम, त्यत्ति नै धेरै एप ब्याकग्राउन्डमा स्मार्टफोनलाई स्लो नबनाई चल्न सक्छ । आजको दिनमा ३ जिबी वा सोभन्दा बढी र्याम भएको स्मार्टफोन किन्नु राम्रो हुन्छ । बजारमा ८ जिबीसम्म र्याम भएका स्मार्टफोन पाइन्छ ।
स्टोरज स्मार्टफोनको भण्डारण क्षमता हो । स्मार्टफोनको स्टोरज जति धेरै भयो तपाईंले त्यत्ति नै धेरै एप, गीत, भिडियो, गेम, फोटो आदि राख्न सक्नुहुन्छ । कुनै स्मार्टफोनमा मेमोरी कार्डबाट स्टोरेज बढाउन मिल्छ, कुनैमा मिल्दैन । मेमोरी कार्ड लाग्नेमा न्यूनतम ३२ जिबी र मेमोरी कार्ड नलाग्नेमा न्यूनतम ६४ जिबी आन्तरिक स्टोरेज भएको स्मार्टफोन किन्नु उचित हुन्छ ।
५. डबल क्यामरा
दुई वा दुईभन्दा बढी क्यामराको प्रयोग भएको स्मार्टफोन बजारमा थुप्रै पाइन्छ । कतिपय स्मार्टफोन निर्माताले त यही फिचर देखाएर बृहत् माकेटिङ गर्ने गर्छन् । सिंगल क्यामराभन्दा डबल क्यामरा भएको स्मार्टफोनले अलि राम्रो तस्बिर खिच्न सक्ने र थप फिचर – जस्तै ब्होके इफेक्ट, ब्लर आदि– पनि हुने भएकाले यसको चर्चा बढ्दै गयो । आजभोलि मिडरेन्ज स्मार्टफोनमा पनि दुईवटा क्यामरा भेटिन थालेको छ । त्यसैले नयाँ स्मार्टफोन किन्दा दुईवटा क्यामरा भएकै रोज्नु राम्रो हुन्छ ।
६. भविष्यमा अपडेट आउने निश्चित भएको
एन्ड्रोइडको सुरुवाती दिनदेखि कै सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्या हो– अपडेट । एप्पलले आफ्नो आइफोन लाइन अपलाई कम्तीमा चार वर्ष अपडेट दिन्छ । तर एन्ड्रोइडमा धेरै निर्माताले २ वर्षसम्म अपडेट दिन्छन् । कतिपय निर्माताले मिडरेन्ज र बजेट स्मार्टफोनलाई अपडेट नै दिँदैनन । त्यसैले स्मार्टफोन किन्नुअघि नै सो निर्माताले कतिको अपडेट दिने गरेको छ भन्ने कुराको जानकारी लिनुहोस् ।
तर २०१८ मा आएर गुगलले एन्ड्रोइड वान प्रोग्रामबाट यो समस्या सुल्झाउन खोजिरहेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै पनि एन्ड्रोइड वान स्मार्टफोनले महिना महिनामा सुरक्षा अपडेट पाउने र २ वटा मुख्य एन्ड्रोइड रिलिजको अपडेट पाउनेछन् । नोकियाका सबै एन्ड्रोइड स्मार्टफोन एन्ड्रोइड वान प्रोग्राममा आवद्ध छन् । साओमीले पनि एन्ड्रोइड वन स्मार्टफोन रिलिज गर्छ । एलजी, एचटिसी, वानप्लस जस्ता कम्पनीहरु एन्ड्रोइड वानमा आवद्ध नभए पनि समयसमयमा अपडेट दिने गर्छन् । अपडेट दिने काममा सामसङ, मोटोरोला, साओमी, हुवावे भने पछाडि नै पर्छन् ।